बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार : उठाउन छाडियो सडक दस्तुर
रूपन्देही । बुटवलको रामनगर र पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा राखिएका सडक दस्तुर संकलन केन्द्रबाट अहिले दस्तुर उठाउन छाडिएको छ । यी दुई ठाउँमा सडक बोर्डले ठेकेदारमार्फत सडक दस्तुर उठाउँदै आएको थियो । बोर्डका प्रमुख कृष्णसिंह बस्नेतले बुटवल–नारायणगढ ‘६ लेन’ मा विस्तारको ठेक्का दिएसँगै दस्तुर उठाउन छाडिएको बताए ।
दस्तुर उठाउन दुई/दुई वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता हुँदै आएको भए पनि यस वर्ष सडक विस्तार हुने भएपछि एक वर्षका लागि मात्र गरिएको थियो । ठेक्का हटेपछि सडक मर्मतमा शिथिलता आएको प्रयोगकर्ताहरूको गुनासो छ । ११४ किलोमिटर लामो यो सडकको निर्माण ठेक्का चाइना स्टेट कन्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ ।
सडक बोर्ड नेपालले रामनगर र गैंडाकोटको सडक दस्तुर उठाउने ठेक्का सुनकोशी निर्माण सेवा कम्पनीलाई दिएको थियो । दुवै ठाउँमा गरेर वार्षिक रू. ९ करोड २ लाख ८० हजारमा ठेक्का दिइँदै आएको थियो । पछिल्लो एक वर्ष यसको दर बढाएर रू. १९ करोड पुर्‍याइएको थियो ।
यो सडक भएर पूर्वतर्फ दैनिक ४ हजार १५ र पश्चिमतर्फ ३ हजार ३२२ गाडीहरू आउने जाने गर्छन् । बुटवल–नारायणगढ पश्चिम सेक्टरका योजना प्रमुख सुरेश न्यौपानेले आफूहरूको टिम सडक मर्मतका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो टिम मर्मतका लागि २४ सै घण्टा तयार छ । बाटो बिग्रेको अवस्थामा तुरुन्त त्यहाँ पुगेर काम गर्छ ।’ योजनाले मर्मतका लागि छट्टै एउटा टिम पनि खडा गरेको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको आईपीओ बुधवार नेप्सेमा सूचीकृत हुँदै